Nagarik News - 'गणतन्त्र मुलुकको अक्सिजन बनिसक्यो'
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव
मुलुकले आठौं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ। संविधान जारीपछिको प्रथम गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मुलुक यो परिस्थितिसम्म आइपुग्दा कस्तो अनुभव गरिरहेका होलान् र देशको भविष्यको आँकलन कसरी गरिरहेका होलान्? सर्वत्र यसको चासो छ। यसै सेरोफेरोमा यादवसँग नागरिककर्मी सुरेश यादवले गरेको कुराकानीको सार :
सेनाप्रमुख र सरकारप्रमुखबीचको टकराबले स्थिति निकै कठिन बनाएको थियो। मैले यस्तो नगर्नुस् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल) दाहालजीलाई बारम्बार सम्झाउने प्रयास गरेँ। तपाईंको बाटो अलग हुन्छ र मेरो बाटो अलग हुन्छ भनेर सम्झाउँदा 'तपाईंकै बाटोमा गएँ भने के गर्नुहुन्छ?' भनेर सोध्नुभयो। मैले त्यसो भए म अर्को बाटो रोज्छु भनेर अगाडि बढेँ। र, एउटाबाहेक सबै दलले मलाई साथ दिए। राष्ट्रपति देशप्रति इमानदार भएकै कारण सायद त्यस बेला मेरो निर्णय सही साबित भयो। त्यसपछि, संविधान निर्माण कार्य पूरा नहुँदै संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। बडो द्विविधापूर्ण समय थियो त्यो। कतिले पहिलो संविधानसभा विघटनपछि पनि त्यसैलाई व्यवस्थापिका संसदका रुपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क पनि गरे। तर त्यति बेलासम्म साढे चार वर्ष बितिसकेकाले म ताजा जनादेश लिएर संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। त्यसैले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा गएँ।
मैले मधेस समस्या देशभित्रकै विषय रहेको बताइरहेको थिएँ। संविधानसभाले दफावार छलफल गर्न कन्जुस्याइँ गर्दै फास्ट र सुपर फास्ट ट्र्याकका नाउँमा नियमावली निलम्बन गर्न थालिएपछि विवाद सुरु भएको थियो जो संविधानसभाको 'नम्स' ले मिल्दैनथ्यो। त्यस बेला संविधानसभाले ठूलै भूल गरेको हो। संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताले पनि त्यस्तो गर्न दिने थिएन। मैले सरकार र संविधानसभा अध्यक्ष (सुवास नेम्वाङ) लाई बारम्बार सचेत गराएँ– यो आयोग होइन, प्रतिनिधिसभा पनि होइन। संसारमा बिरलै यस्तो देश पाउनुहुन्छ जहाँ संविधानसभाबाट सफल संविधान निर्माण भएको होस्। झन् दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन भएकाले धेरै हतार गर्नुपर्ने कारण थिएन। मैले संविधानसभामा दफावार छलफल गरी संविधानको रूपरेखा जनतालाई प्रस्ट बुझाएर अगाडि बढ्न दबाब दिइरहेको थिएँ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उपाय बताउँदा उल्टो मैले आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउन यस्तो गरेको आरोप लगाइयो। राष्ट्रपति पदमा सात वर्ष बसिसकेको थिएँ। एक–दुई साता बढी अझै बसिदिन्थँे, त्यसले के नै बिग्रिहाल्थ्यो र! दोष मलाई लगाउने, तर राजनीतिक दलहरूले सत्ताको बाँडफाँटमा कसरी जाने भनेर हतार गरिरहेको अवस्था थियो त्यो। म के भन्न चाहन्छु भने समग्रमा देश र परिस्थिति नबुझेका पार्टीहरूले हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायत कुनै पार्टीमा परिपक्व नेता भेट्न सकेको छैन मैले। मैले राजनीति गरेको बेलाजस्तो मधेस, पहाड र हिमाल गरी सम्पूर्ण देश बु‰ने नेताको अभाव भएकै हो यति बेला। त्यसैले यति धेरै समस्या आएको हो। समस्या समाधानका लागि अलिकति गति सीमित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने र जारी समस्याबाट सुरक्षित अवतरण गराउँदै मुलुकलाई नयाँ संविधान प्रदान गरी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो तर्क थियो। अब भन्नुस्, म कसरी अरूको इसारामा चल्ने भएँ? लोकतन्त्रमा अरूको कुरा सुन्ने र बु‰ने, समय लागे पनि मन्थन गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने हुनुपर्छ।
किन ढिलाइ भइरहेको छ त राम्रो काम गर्न?
नेताहरू देशको भन्दा समुदाय र भूगोलका भइदिए। म त मिडियालाई पनि दोष दिन्छु। मिडियाले पनि समग्र राष्ट्रिय समस्या बु‰न सकेनन्। देशका कमै मात्र मिडियाले कुरा बुझे। पहाड र मधेसमा मिडियाहरु पनि विभाजित भइदिए। त्यसैले मिडिया पनि परिपक्व नभएजस्तो लाग्छ मलाई। महात्मा गान्धी भन्थे– हिन्दु र मुस्लिम मिलेर अगाडि नबढे देश बन्दैन। नेपालमा पनि पहाड र मधेस नमिली देश बन्ने परिकल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ। विविधतामा एकता यो राष्ट्रको पहिचान हो। म सुरुदेखि पहाडे र मधेसी मिलेर जानुपर्छ भन्दै आएको छु।
राजनीतिबाट अलि छिटो बाहिरिनुपरेजस्तो लाग्दैन?
राजनीतिक रूपमा मैले क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै छुजस्तो लाग्छ। म डाक्टरी पेसाको मान्छे, राजनीतिमा पुगेर धेरै गरेँजस्तो पनि लाग्छ। राजनीति त पेसा होइन, यो नितान्त सेवा हो। राजनीतिमा लागेपछि मैले के गरेँ/गरिनँ, त्यो भविष्यले मूल्यांकन गर्ने हो। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सबभन्दा उच्च स्थानमा पुगिसकेँ। अब पूर्वराष्ट्रपति भइसकेपछि यो गथर्ें, त्यो गथर्ें भनेर हुन्न, दिवास्वप्न देख्ने मेरो बानी छैन। म कुरामा होइन, कर्ममा विश्वास गर्ने कर्मयोगी हुँ।
बाँकी जीवन कसरी बिताउने योजना छ?
वातावरण क्षेत्रमा चुरियालाई केन्द्रमा राखेको छु। हिमालको बरफ पनि जोगिनुपर्छ। पहाडको माटो र तराईको उर्वर भूमि कसरी बाँच्छ, त्यो मेरो अबको रुचिको विषय हो। समाज कसरी मिलेर जान्छ, राष्ट्रिय एकता कसरी बलियो हुन्छ, मेरो बाँकी जीवनको मूल ध्यान यसैमा रहनेछ। चुरियाको संरक्षण तराई र चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६२ प्रतिशत जनताको प्रत्यक्ष जीवनको सरोकारको विषय हो। चुरियाक्षेत्र विनाश भयो भने ६२ प्रतिशत जनताको जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर गर्छ भने पूरै मुलुक धरापमा पर्ने खतरा पनि छ। त्यसैले, मेरो प्रमुख लक्ष्य चुरेलाई जोगाएर वातावरण बचाउने हो। चुरेले नै मधेस र पहाडबीच सद्भाव कायम राख्न सक्छ।
मैले उठाएको चुरे संरक्षण अभियान अघि बढिरहेको छ। अहिलेसम्मको सबै सरकारले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेकामा खुसी छु। आगामी सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी छ र यही संसद्बाट चुरे संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन पनि बन्ने विश्वास छ। म आजीवन यो विषयलाई सर्वसाधारणबीच चर्चा गरिरहनेछु। हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकता कायम राख्न भूमिका निर्वाह गरिरहनेछु।
More in this category: « सर्वोच्चको आदेशलाई ९ बुँदेले चुनौती दिन सक्दैन रेमिटेन्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएकाे छैन: ढकाल »